Madagasikara : Tsoa-kevitra Tamin’Ilay Fiokoana Farany Teo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2012 10:31 GMT
Hatramin'izay nakàna ny fahefana tamin'ny taona 2009 izay, tsy vao voalohany no nisy ny fifandonana teo amin'ny miaramila alohan'ny fifanelanelanana sy ny fitadiavam-bahaolana. Nanatrika ny zava-niseho teny ifotony ny mpanao gazety iray, Rianasoa ary nampita mivantana izay zava-niseho tao amin'ny kaonty twitter-ny, nandefa sary fanadihadiana mikasika ny fizotry ny fiokoana kosa i Newsmada.
Nanamarika tamim-bazivazy ny bilaogy Fijery fa efa fantatra mialoha toy ny horonan-tsarimihetsika hollywoodiana ny zava-nitranga :
Tamin'ny fanambarana ny fihaonana hotontosaina amin'ny 24 Jolay ao Seychelles, fihaonana eo amin'ny filoha Ravalomanana sy Andriamatoa Rajoelina, niloka tamin'ny namako iray aho fa tsy maintsy hisy ny zava-hitranga tsy ampoizina mba tsy hisian'ny Fihaonana na ny hanemorana izany. Azoko ny loka, nandritra ny sakafo hariva: nanjary toy ny siansa ireo zava-niainana nandritra ny telo taona farany, ary efa fantatra mialoha foana izay mety hiseho ka hany tsy misy tsirony intsony. Amin'izao hadalana izao, ahoana no handraisan'izao tontolo izao antsika ho matotra ka mahatonga antsika ho olon'ny sarimiaina sisa ? [..] Hotsaroana ny tantaran'ny fanafihana ny Viva sy ireo baomba vita-tanana mialoha ny fivoriana nomanina tany Addis-Abeba (jolay 2009) ; ny tifitra natao tamin'ny fiaran-dRajoelina talohan'ny Maputo III (desambra 2009) ; ary ny raharaha fanonganam-panjakana nampahafantarina ny vahoaka nialoha ny fivoriana any Johannesburg (avrily 2010) [..] Efa vita tsara ny “ballet”. Sehatra 1, mialoha ny fikasana fampihavanana no misy raharaha « mafana sy masiso ». Sehatra 2, ora vitsy, na minitra vitsy, eny hatramin'ny segondra vitsy monja no ahitan'ireo mpanao fanadihadiana henjana sy kalaza malagasy avy amin'ny zandary, polisy sy ny hafa karamain'ny HAT, ny meloka : ny avy ao amin-dRavalomanana. Sehatra 3, manambara ny HAT fa tsy handray anjara amin'ny fivoriana fanelanelanana nomanina »
Nanambara ny Reflexiums fa efa nalahatra tsara toy ny drafitra matipaika ny fizotry ny fikomiana :
Na ireo diplaomaty ao Madagasikara aza toa niombon-kevitra ihany fa efa nomanina mialoha ny zava-nitranga. Nanamarika tao amin'ny kaonty Twitter-ny kosa ny Newsmada fa toy izao no hita tamin'ny tatitra avy amin'ny AFP :
Ny tatitra nataon'ny BBC momba ity fikomiana ity no nanamarika fa manana anjara toerana lehibe amin'ny politika malagasy ny tafika [en]:
Nanipika i Michael Rakotoarson fa tsy azo tsinontsinoavina ny tombontsoa ara-bolan'ireo miaramila amin'ity fiitatry ny krizy ity:
Nanamarika kosa ny RFI tetsy andaniny fa tsy mazava mihitsy ny tanjona tiana Hahatongavana amin'izao fikomiana izao :
Hita ihany fa tsy misy mahafantatra ny anton'ity fikomiana ity, eny fa na dia ny ao amin'ny tafika aza. Le Courier International mitatitra fa :
Raha manameloka ny tafika amin'ny antony mahatonga ny fifandonana ny ankamaroan'ny Malagasy, manolotra antony hafa amin'izay nahatonga ity fiokoana ity ihany kosa i Randy.
Mampitodika any amin'ireo mety ho voantohintohina amin'ny fiveren-dRavalomanana ny bilaogy Fijery:
Reflexiums namehy fa tsy ilaina ny manontany ny antony nahatonga izao fifandonana izao. Tokony hanontany ny Malagasy hoe nahoana izy ireo no miaritra foana ny toe-javatra tahaka izao :